मिठाइबाटै किन राखिन्छ एन्ड्रोइडको नाम ? एन्ड्रोइडको रोचक प्रसंग
प्रकाशित मिति : 9:57 pm, August 22, 2015
गुगलले नयाँ एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गर्दैछ । एन्ड्रोइडको ललिपप ५.० लाई रिप्लेस गर्ने यो नयाँ भर्सनको एन्ड्रोइडको नाम रहेछ 6.0 M यहाँ एम को अर्थ के होला ? भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वभाविकै हो । खासमा एम अक्षरको अर्थ हो मार्शमेलो (Marshmallow) । मार्शमेलो वास्तवमा एक चिनीयुक्त क्यान्डी चकलेट हो ।
गुगलका इन्जिनियरिङ विभागका उपाध्यक्ष डेव बुर्केले टि्वटरमा यो कुराको खुलासा गरेका छन् की नयाँ भर्सनको एन्ड्रोइडको नाम ६.० मार्शमेलो हुनेछ । उनले टि्वटरमा एक फोटो शेयर गर्दै “Marshmallow!!!” लेखेका छन् ।
विश्वमा सबैभन्दा बढि प्रयोगमा आएको मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम हो एन्ड्रोइड । यो अपरेटिङ सिस्टमका फिचर्स जति आकर्षक हुन्छन् त्यसको नाम पनि उत्तिनै अनौठो तथा आकर्षक हुन्छ ।
एन्ड्रोइडको नेपाली अर्थ हुन्छ मानिस झैँ देखिने र मानिसले जस्तै काम गर्ने यन्त्र अर्थात् रोबोट । अर्को रोचक कुरा त के भने एन्ड्रोइडका हरेक नयाँ संस्करणको नाम कुनै मिठाइको नामबाट राखिएको हुन्छ ।
आखिर एन्ड्रोइडको नाम किन मिठाइको नाम बाट राखिन्छ त ? यद्यपि गुगलले आधिकारिक रुपमा यस बारेमा अहिलेसम्म कुनै खुलासा गरेको छैन् । तथापि गुगलका एकजना प्रवक्ता र्याण्डल सराफाले यो गुह्य कुराको बारेमा केही रोचक कुरा बताएका छन् । उनका अनुसार समूहलाई एक आपसमा जोडिराख्नका लागि एन्ड्रोइडको नाममा मिठाइको प्रयोग गरिएको हो । उनका अनुसार अहिलेसम्म मिठाइकै नामबाट एन्ड्रोइडको नाम राखिँदै आएको छ र भविष्यमा पनि त्यसै गरिनेछ । यो विषयमा अरुलाई बुझाउन गाह्रो हुने तर यसले गुगलको टीमलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी उनको छ ।
गुगलको सन्तान होइन एन्ड्रोइड
एन्ड्रोइड अपरेटिंग सिस्टम खासमा सुरुमा गुगलले उत्पादन गरेको होइन । एन्डी रुबिनले एन्ड्रोइड कम्पनीको स्थापना गरेका थिए । यो कम्पनीलाई सन् २००५ मा गुगलले किन्यो । कम्पनी गुगलमा बिलिन भएपछि रुबिनले गुगलमै काम गर्न थाले । यद्यपि अहिले उनले गुगल छाडिसकेका छन् । एन्ड्रोइड गुगलमा मिसिएपछि नै रुबिनले एन्ड्रोइड अपरेटिंग सिस्टमको विकाश गरेे र करोडौँ मानिसम्म पूराउन सफल भए ।
एन्ड्रोइड लिनक्समा आधारित भएर डिजाइन गरिएको मोबाइल फोन अपरेटिङ सिस्टम हो । एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिटम र गुगलको रोबोटिक डिभिजनका पछाडि रुबिनकै दिमागको भूमिका छ ।
एन्ड्रोइड को एबीसीडी
एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको कामका बारेमा एक अर्को रोचक तथ्य पनि छ । मिठाइहरुको नाम राख्नुका अलावा एन्ड्रोइड अपरेटिंग सिस्टमका हरेक भर्सनकोे नाम अंग्रेजी अल्फाबेटका अनुसार एबीसीडीमा राखिन्छ । एन्ड्रोइडको पहिलो भर्सनको नाम ए बाट सुरु हुने मिठाइको थियो । दोश्रोको बी बाट सुरु भयो, तेश्रोको सी बाट र अहिले क्रमशः एम बाट सुरु हुँदैन । अहिलेसम्मका एन्ड्रोइड अपरेटिंग सिस्टम यस्ता छन्ः
*> *Alpha (1.0)
*> *Beta (1.1)
*> *Cupcake (1.5)
*> *Donut (1.6)
*> *Eclair (2.0-2.1)
*> *“royo (2.2-2.2.3)
*> *Gingerbread (2.3-2.3.7)
*> *Honeycomb (3.0-3.2.6)
*> *Ice Cream Sandwich (4.0-4.0.4)
*> *Jelly Bean (4.1-4.3.1)
*> *KitKat (4.4-4.4.4)
*> *Lollipop (5.0-5.1)
*> *Marshmallow (6.0)
झण्डै गर्भमै तुहिएन
विश्वको सबैभन्दा ठूलो तथा लोकप्रिय अपरेटिङ सिस्टम निर्माण गर्ने कम्पनी एन्ड्रोइड -पछि गुगल) आफ्नो सुरुवाती अवस्थामा आर्थिक संकटका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो । २००३ मा स्थापना भएको एन्ड्रोइड इंक आफ्नो खर्च जुटाउन असमर्थ भएको थियो । केही समयपछि सन् २००५ मै यसलाई गुगलले खरीद गरेर आफुमा विलय गरायो । त्यसपछि एन्ड्रोइड मा केही खास परिवर्तन गरियो र यो अन्ततः विश्वको सबैभन्दा लोकपि्रय मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम बन्न सफल भयो ।
डिजिटल क्यामेराका लागि बनेको थियो एन्ड्रोइड
एन्ड्रोइड अपरेटिंग सिस्टम सबैभन्दा पहिला डिजिटल क्यामेराका लागि डिजाइन गरिएको थियो । एन्ड्रोइडको विकाश भैसकेपछि यसको निर्माता टोलीलाई लाग्यो की यो स्मार्टफोनका लागि निकै राम्रो अपरेटिंग सिस्टम बन्न सक्छ । त्यसपछि यसलार्य फोन अपरेटिङ सिस्टमको रुपमा डिजाइन गरियो । -एजेन्सीको सहयोगमा